खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रगत सुधारकानिम्ति सामुहिक प्रयास आवश्यकः महानिर्देशक श्रेष्ठ
शनि, भदौ २७, २०७७
खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरिय वि सं २०७७ भाद्र २६ को निर्णयबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकका रुपमा ईन्जिनियर मीना श्रेष्ठ नियुक्त हुनु भएको छ । निजामती सेवामा वि सं २०५३ मंसिरमा प्रवेश गरेपछि करिब २४ वर्षको समायावधीमा विभागको प्रमुखको रुपमा चयन भएसगैँ ईकोसमाचार डट कमले अहिलेसम्मको यात्रा र भावी कार्ययोजनाका विषयमा संवाद गरेको छ । सोही संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
नयाँ जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा यहाँलाई बधाई छ ।
विभागको महानिर्देशक हुनुभएको क्षणलाई कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो करिब २४ वर्षको जागिरे जीवनमा पाएको एउटा नयाँ जिम्मेवारीको रुपमा लिएको छु । स्वभाविक रुपमा अहिले विभागको नेतृत्व गरेर विद्यमान रुपमा प्राथमिकतामा परेका योजना कार्यन्वयनमा प्रतिवद्ध रहने कुराले केहि सोचमग्न र खुसी भएकी छु ।
तपाइको वाल्यकाल र निजामती सेवामा प्रवेशको संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस् ।
मेरो जन्म भक्तपुर जिल्लामा भएको हो । मैले एस एल सी सम्म मध्यपुर ठिमीमा रहेको आर्दश माध्यमिक विद्यालयबाट पास गरेको हु । मलाई बिद्यालय तहदेखिनै पढाइमा रुची लाग्थ्यो र परिवारबाटपनि सहयोग पाएँ । वि सं २०४४ साल र २०४८ सालमा क्रमश पूल्चोक क्याम्पसबाट आई र बि ई उत्तीर्ण गरे ।
मलाई स्मरण छ, वि सं २०५३ साल मंसिर महिनादेखि बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक उप समुह अन्र्तगत ईन्जिनियर पदबाट सेवामा आएकी हुँ । त्यसपछि विभिन्न कार्यलयमा काम गर्दै २०६६ सालमा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर लर २०७१ मा खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिव स्तरको जिम्मेवारी संहाल्दै आएको थिए । करिब ६ वर्षपछि विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी छु ।
मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट विभागको महानिर्देशक बनाउनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हेर्नुहोस् , सरकारी सेवामा निरन्तर रुपमा आफ्नो ज्ञान र क्षमता अनुसार काम गर्ने मेरो स्वभाव र वातावरण तथा सरसफाइको क्षेत्रमा पहिले गरेको काममा मूल्याङ्कन भएको अनुभूती गरेको छु । यस सन्दर्भमा मन्त्री ज्यू, सचिव ज्यू लगायत यसमा शुभेच्छा राख्नुहुने सबैमा आभार व्यक्त गर्दछु । शौचालय, सरसफाइ, खानेपानी लगायतका विषय नागरिको मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था भएकाृ छ । नेपालका धेरै स्थानमा अझै न्युनतम पूर्वाधार तथा सुविधा पुग्न नसकेको अवस्थामा मेरो प्राथमिकता रहनेछ । पद आफैमा एउटा जिम्मेवारी हो तर संस्थागत रुपमा हामीले राखेका लक्ष्य प्राप्तीका निम्ति सामुहिक प्रयास तथा एकवद्ध हुनु आवश्यक रहेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भईसकेको छ अझ कोरोनाको क्रास रहेकै अवस्थामा योजना गरिएको उपलब्धी हासिल होलान् त ?
स्वभाविक रुपमा अहिले कोरोना भाईरसको संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको छ । यो समय पहिलेजस्तो सामान्य अवस्था भने होईन । हामी सबै सम्बद्ध कर्मचारी साथीहरु बसेर योजना तय गरेका छौं । अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामापनि कामलाई निरन्तरता दिन हामीले प्राथमिकता तय गरेका छौं । कोरोनाकै कारण सरसफाइकोे महत्व समेत बढेको छ । \_ हाल संचालन भएका योजना र हुने योजनालाई कसरी अगाडि बढाउदै समयमानै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति बनाएर अघि बढ्नेछौं म तपाईकै संचारमाध्याबाट तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा सहकार्यका लागि अपिल गर्दछु ।
खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणापश्चात त्यसको दिगोपना र पूर्ण सरसफाइ अभियानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भएर दक्षिण एशियामानै फरक उपलब्धी हासिल गरेको छ । म उपमहानिर्देशक रहदाँ देखिनै यस विषयमा सक्रिय रुपमा खटिएकी थिएँ । अहिले हाम्रा प्राथमिकताहरु पहिचान भईसकेका छन् । हामी रणनीतिक हिसावले त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सबैको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । पूर्ण सरसफाइका सूचक कार्यन्वयनमा केही पालिकाहरुले आफ्नो सक्रियता देखाएर सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ ।
विभाग तथा विकास साझेदारी निकायको रचनात्मक सहयोगले धेरै स्थानीय सरकारले वास प्लान निर्माणको काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सरसफाइ, खानेपानी, शौचालय, ढल व्यवस्थापनजस्ता विषयसगँ सम्बन्धित लक्ष्य एक पटक पूरा गर्दैमा पूर्ण हुने कुरा होईन । समय, स्थान तथा जनघनत्वमा आएको परिवर्तनले यसको आवश्यकता तय गरेको छ त्यसैले विभागले आफ्नो प्राथमिकता सोही अनुरुप तय गर्दछ भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सरसफाइ र खानेपानीको क्षेत्रमा विकास साझेदारी संस्थाको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाल आफैमा विकासका विभिन्न सूचकमा क्रमिक रुपमा उक्लदै गएको छ । सरसफाइ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको विषयमा प्राविधिक, आर्थिक तथा प्रविधिगत स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यका बढीरहेको हुन्छ । यस क्षेत्रमा भनौ वा सरसफाइ र खानेपानीको मुद्धामा विकास साझेदारी निकायको सहयोग रचनात्मक र सकारात्मक रहेको छ । म यसै संचारमाध्यम मार्फत हाम्रा दीगो विकासका सूचक प्राप्ती गर्न तथा लक्ष्य हासिलकानिम्ति विचाग हातेमालो गर्न तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भनौ वा विभिन्न समुदायमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुभएको सहयोग प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
धेरैले विभिन्न संचार माध्यमबाट पहिलो महिला महानिर्देशक भनेर बधाई दिएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हेर्नुहोस स्वभाविक रुपमा नेपाली समाजको संरचनामा रहेर महिला वर्गलाई धेरै क्षेत्रमा कार्य व्यवस्थापन गर्न पक्कै सहज छैन । विभागको महानिर्देशक हुनुमा धेरैले महिलाको नेतृत्व भनेर जुन खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । अहिले समय फेरिएको छ । पदमा रहने कुनै पात्र भन्दापनि क्षमता, सिप र अनुभव भएका जो कोही व्यक्तिलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु । प्रत्येक व्यक्तिको बुझाई फरक रहन सक्छ तर परिवर्तन र विकासका लागि सबैले ज्ञान सिपको प्रयोग गरेर रचनात्मक काम गर्नुनै उद्देश्य रहेको छ ।
विभागका पूर्व महानिर्देशक र अन्य सहकर्मीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म अहिले जुन अवस्थामा छु यो सबैको सहयोगको उपज हो । मैले पाएको यो जिम्मेवारी पूर्व महानिर्देशक ज्यूहरुले केही वर्ष पहिलेनै अनुभव गरेर कार्य सम्पादन गरि सक्नु भएको छ । उहाँहरुले प्राप्त गरेको अनुभव बाड्न र सहकार्यका निम्ति सविनम्र आग्रह गर्दछु । मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरु जो विभाग तथा विभाग मातहतको कार्यलयमा कार्यरत हुनुहुन्छ यहाँहरु सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी सही रुपमा निर्वाह गर्न आग्रह गर्दछु ।
नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य तथा दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि सामुहिकतामा विश्वास गर्न आग्रह गर्दछु । हामी सबैले एक अर्कालाई सहयोग र सहकार्य गरेर अघि बढौं भन्न चाहन्छु । अन्य सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, संचार माध्यम, संघ संस्थालाई हातेमालो गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।